Dalka Faransiiska oo Doortay Madaxweyne Cusub (VIDEO) - Hablaha Media Network
HMN:- Doorashadii xilka madaxweynenimada ee xalay ka dhacday dalka Faransiiska ayaa waxaa ku guulaystay Emmanuel Macron, kaasi oo helay ku dhawaad 65.5% codadkii la dhiibtay, halka haweeneydii la tartamaysay ee cunsuriyadda ah Marine Le Pen ay heshay ku dhawaad 34.5%.
Emmanuel Macron ayaa ah 39 jir aan horay loogu dooran wax xil ah, waxa uuna noqonayaa madaxweynihii ugu da’da yaraa ee soo mara dalka Faransiiska.
Mr Macron ayaa sidoo kale noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee tan iyo sanadkii 1958 ka soo baxa xisbi aan ahayn labada axsaab ee ugu waaweyn ee dalka Faransiiska.
Waxa uu sheegay in bog cusub uu u furmay taariikhda dalka Faransiiska, Kumannaan taageerayaashiisa ka mid ah ayaa isugu soo baxay bartamaha caasimadda Paris, halkaasi oo uu kula hadlay madaxweynaha cusub.
Madaxda caalamka oo uu ka mid yahay madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha la doortay ee Emmanuel Macron.